BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Xuseen Bisad: Dhererkeygu waa 2.47m
Xuseen Bisad: Dhererkeygu waa 2.47m
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 8 Novermber, 2012, 19:44 GMT 22:44 SGA
Xuseen Bisad waa ninka labaad ee caalamka ugu dheer, sida uu sheegtay. Waxa uu BBC uga sheekeynayaa dhibaatada ka heysata dhererkiisa oo dadku ay u soo daawasho tagaan iyo dhibaatada ka heysata dhar iyo kabo la'eg inuu helo.
Axmed Saciid Cige oo warreysanaya Xuseen Bisad
Xuseen Maxamed Bisad oo 38 sano jir ah waa nin soomaaliyeed, oo sheegtay inuu yahay qofka labaad ee adduunku ugu dheer.
Waxaa ka dheer sida uu sheegay nin u dhashay waddanka Turkiga.
Wuxuu ku noolyahay magaalada London, laakiin wuxuu muddo sanado ah kadib ku laabtay magaalada Hargeysa
oo hadda uu joog.
Weriyaha BBC Axmed Saciid Cige ayaa Xuseen Maxamed Bisad kula kulmay hargeysa oo ka wareystay bal
dhibaatada ka haysata dadka daawanaaya marka uu suuqyada magaalada lugeynaayo iyo waayihiisa.